မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XL | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XL
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XL
Posted by Kyaemon on Mar 25, 2017 in Business & Economics, Education, Think Different, Think Tank |4comments
ယခင် # ၃၉ XXXIX ဆောင်းပါးမှအဆက်
(ရစ်တာ ၇.၅ နဲ့အထက် ငလျင် ၃ ကြိမ်အကြောင်း
၁၉၃၁ က ကာမိုင်း
၁၉၄၆ က တကောင်း
၁၉၉၁ က ထီးချိုင့်။တို့ဖြစ်ကြကြောင်း၊
၁၉၉၄ တွင်လဲ မစ်ကြီးနား မို့နယ်မှာ
ရစ်တာ ၆ အင်အား ရှိငလျင်က လှုပ်ခါသွားကြောင်းပြောပါတယ်၊
These strong seismic waves were Karmine earthquake in 1931, Takaung earthquake in 1946, and Htichaint earthquake in 1991. An earthquake with6Richter scale shook at Myitkyina Township in 1994. So, it is reasonable to
assume that this area is the earthquake zone.
မြစ်ဆုံဆောင်းပါး # ၂ IIက ကချင်ပြည်နယ်မြေငလျင်မြေပုံကိုကြည့်ပါ (ပူးတွဲ)
ပညာရှင်Nobuo Hurukawa နဲ့ဖြိုးမောင်မောင်တို့က ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကပုံပါ၊
“၇.၅ ရစ်တာနဲ့အထက်” ဆိုလို့ တနေရာတည်းပါဘဲ၊သုံးနေရာမဟုတ်ပါ၊
“Mgs” ဆိုတဲ့သင်္ကေတနဲ့ အစိမ်းဝိုင်းလေးက မစ်ဆုံ မာက်ဘက် ၁၆ဝ မိုင်
ဝန်းကျင်မှာရှိပြီး ၁၉၃၁ ခုနှစ် က ၇.၆ ရစ်တာနဲ့ ပါ။
ယင်းမြေပုံအရ ကျန်” IDs” နဲ့ “TMs” သင်္ကေတတွေ နား က အစိမ်းဝိုင်းကလေးတွေက
ရစ်တာ ၇.၃ နဲ့ ၆.၉ ဖစ်ကြပြီးရစ်တာ ၇.၅ အာက်မှာပါ
မြစ်ကြီးနားမှာ ၁၉၉၄ ရစ်တာ ၆ ငလျင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုငြားလဲ
အမေရိကန်မြေငလျင်ဋ္ဌာနမှာ ဒီငလျင်ကို ရှာမတွေ့ရပါ၊ ပုံတွေကြည့်ပါ၊
၁၉၀ဝ ဇန် ၁ မှ ၂၀၁ရ မတ်လ ၁၉ အထိ
ရစ်တာ ၆ နဲ့ အထက် အဲဒီဘောင်မှာရှာတာ
၁၁ရ နှစ်ကာလအတွင်: မစ်ကြီးနားမြို့မှာရစ်တာ ၆ နဲ့အထက်
ရင်မမှန်ပါ၊မြစ်ကြီးနားတဝှိုက်ကငလျင်ဒေသလို့ ဆွဲ ပါရင်လဲမမှန်ပါ၊
၁၉၉၄ ၆.၁ ရစ်တာတခုကတရုပ်နယ်ခြားကပါ
အထက်ပါ ၁၉၉၄ မလ ၂၉ ကရစ်တာ၆.၅ က ရွှမန်းနဲ့နေပြည်တော်ကြား
ရခိုင်ရိုးမနား မကွေးတိုင်းကပါ၊တပြည်လုံးအတိုင်းအတာဘောင်နဲ့ရစ်တအာ၆.၅ နဲ့
စင်စစ်မှာ ရစ်တာ ၆ ဆိုတာ က ၇.၅ လာက်တောင် မရှိပါ၊ ၁၅ ပိုင်း ၁ ပိုင်းဘဲ
“ဆယ်လီစံနစ်” ပါ၊၊ ရစ်တာ ၆ ဆိုရင် “အလယ်အလပ်Moderate” ဖြစ်လို့
သာမန်အားဖြင့်ရေကာတာအတွက် ထည့်တောင် မပြောကြပါ၊
အောက်ကပုံဇယားက အဝါရောင် နှစ်ကြောင်း ကိုကြည့်ပါ၊
ဇယားက ရစ်တာ ၆ ကိုModerate အလယ်အလပ်လို့ဘဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်၊
ဒေါက်တာသန်းသွဋ်အောင်ဟောတာကအနှစ်တရာမှာငလျင် ၃, ၄ ခုဘဲ၊
မိုးဇလညွန်ချုပ်ဟောင်းဦးထွန်းလွင်ကျတော့ ဒိထက် မ က ပါ၊ သူ့ရဲ့မြေငလျင်
ပုံ (ပူးတွဲ) မှာ ငလျင်အစက်တွေကမှိုလိုပေါက်လို့ဘဲ၊
သတင်းစာဆရာနဲ့မိုးဇလဝန်ချုပ်ဟောင်း ဘယ်သူကပိုမှန်မလဲ? တနည်းပိုမှားမလဲ?
မိုးဇလညွန်ဝန်ချုပ်ဟောင်းဖြစ်သော်လည်းဘဲ ဦးထွန်းလွင်ရဲ့မြေငလျင်ပုံက ပိုမမှန်လာပါ၊
ရေကာတာမှာထည့်လေ့မရှိ သိပ်လဲမဆိုင်တဲ့ ရစ်တာ ၄ small အငယ်စားတွေ ကို ရောထည့်ထားလို့
www.sagaingfault.info….Locations of the last ten years of earthquakes greater than magnitude 4
for the region are shown ….)
အထက်ပါဇယားမှာ ရစ်တာ၄ ကို small အသေးစားလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊
ရစ်တာ ၄ ကဆိုရင် လဘက်ရည် ခွက်
ထဲက လှိုင်းဂယက် ကလေး သာသာဘဲ သိပ်မသိသာအရာလဲမပါ
အနှစ်တစ်ရာ မှာ ၇.၆ တကြိမ်သာ၊
၆ ဝန်းကျင်ဆိုလဲ ရကာတာထိခိုက်လောက်အောင် အင်းအားမရှိလှ
ငလျင်ကြောနဲ့ မိုင် ၆၂ မိုင် ၈၄ ဝး၊လို့ငလျင်ဒေသ (ပြတ်ရွေ့ earthquake fault)
ငလျင်နဲ့ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်တွေ Seismologists ကိုမေးကြည့်ပါအုန်း ရွှေကလောင်ရှင်ရယ်၊
ရစ်တာ ၉ အကြောင်း ကိုးကားချက်တွေ
Basis (Bases) for Richter Scale9calculations.
….In response, the government said that the dam would withstand an earthquake of magnitude 8.0 Richter scale. In an interview with Xinhua News, Lu Qizhou, President of China Power Investment Corporation said that Myitsone Hydropower Station follows the standard of fortification intensity 9, two points above the intensity of Zipingbu Hydropower Station that withstood 2008 Sichuan earthquake of 8.0 Richter scale. On the other hand, …
ICOLD ရကာတာကြီးအသင်း ရဲ့ (အသစ်) စံချိန်စံညွန်း ပဌာန်းချက်အရ
စံချိန် ၉ ကိုလိုက်နာတယ်၊ (၂၀၀၁ ကပြဌာန်းတဲ့Bulletin ၁၂ဝ ကိုဆိုလိုဘို့များ)
တရုပ်ပြည်က Zipingpu ရေကာတာ ထက်တောင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရေကာတာတွေကရစ်တာ၂ ရစ်ပို ကြီး
(Zipingpu ရေကာတာကငလျင်ထက် အဆ ၁၀ဝ ကြီးတဲ့ငလျင်ကိုခံနိုင်အောင်)
Zipingpu website extracts
Performance of Zipingpu CFRD during the strong earthquake2.General features of Zipingpu CFRD
…..According to the original earthquake intensity map, the basic earthquake intensity of the dam site area is VII. The designed earthquake intensity is VIII, with the peak ground acceleration of 0.26g. The distance from Zipingpu CFRD to the epicenter is 17 km.
ဒီလိုရစ်တာ ၉ စံညွန်းကအရေးကြီးလို့ စာချုပ်မှာပါရှိရင်
ဒီ ရစ်တာ ၉ အဆင့် ကိုရအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရလာတယ်ကို
(Myitsone Assessment Commission to confirm the richter scale from contractual agreements or negotiations)
Ex-Minister Zaw Min said Richter Scale is 8 (which is quite high and acceptable). Obviously, anything higher than 8 (like9or in-between) isabonus
It will further boost public relations with skeptics and help win future votes.
ယခင်ထက် ခုတလော ငလျင်တွေက ပိုပိုဖြစ်လာတယ်
၂၀၀၄ မှာ ဆူမတ်တြာ ငလျင်ဖြစ်ပြီးနောက် ရစ်တာ ၈ အထက် ငလျင်ကြီး
၁ဝ ကြိမ် ဒီဒေသမှာလှုပ်ခါသွားတယ်
နရ တဲ့ မစ်ကြီးနားပြည်သူ သုံးသိန်း ကို ကျနော်တို့ကဘယ်လို နှစ်သိမ့်
Earthquakes did not occur in the past as much as recent times. After 2004 Sumatra earthquake, ten earthquakes with above 8 Richter scales jolted in the region. These are surprising seismic activities. What will happen whenahuge earthquake stroke Myitsone region
How can we appease over 300 thousand people in Myitkyina plain, who are passing the long nights with unclosed eyes?
မြေထုအချပ်ကြီးကနောက်အချပ်ကြီးတခုထဲ ထိပ်တိုက်တိုးဝင် Subductionဖြစ်
ဒါဟာRing of Fire Subduction မီးစက်ကွင်းအတွင်း
မန်မာစစ်ကိုင်းငလျင်ကြောက ဆူမတ်တြာနဲ့မဆိုင်ပါ၊ပြတ်ရွေ့ faultလဲတဆက်ထဲမဟုတ်ပါ
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့fault လဲ Subduction မဟုတ်ဘဲ ဘးပွတ်ရှပ်သွားSide Slip ပါ၊
၊Subductionအကြောင်းကို သိလဲမသိ နားလဲမလည် မးလဲမမေး မလေ့လာဘဲနဲ့လိုက်
အမေရိကန် EU, UK, Canada တို့ကရေကာတာသောင်းချီ လုပ်ပြီး
ငလျင်ကြောခပ်ထူထူ ပါ်ဆောက်တဲ့California & Japan, Iran ရကာတာမှာလဲ
အောက်ပါဆောင်းပါး # ၆ VI နဲ့ # ၁၉ XXI တို့မှာလဲ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်၊
မသိ နားမလည် မလေ့လာဘဲနဲ့လုပ်တော့ ကိုယ်ကလဲအလှန့်တကြား သူများ
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VI——-
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXI – Kyaemon
၂၀၁၁ ဟောစဉ်က မြစ်ကြီးနားလူဦးရေ ၃ သိန်းဆိုတာလဲမှားနေပါတယ်၊
၁၉၈၃ မတ်လ ၃၁ သန်းကောင်စာရင်း မှာ ၅၆,၄၂ရ ဖြစ်ပြီး၊
၂၀၁၄ မတ်လ ၂၉ သန်းကောင်စာရင်း မှာ ၂၄၃,၀၃၁ ဖြစ်ပါတယ်၊
(1983) mostly: Rand McNally International Atlas 1991.
(2014) The 2014 Myanmar Population and Housing Census – The Union Report, May 2015 (web).
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် ဟောချိန်၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလကုန်လောက်မှာ
မြစ်ကြီးနားလူဦးရေ၃၀၀,၀၀ဝ ဆိုတာ ဘယ်ကရလာသလဲ မေးစရာဖြစ်နေပါတယ်၊
(၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလ က ၂၀၁၄ မတ်လ ထက် ၂ နှစ်ခွဲကျော်စောပေမဲ့
အစောပိုင်:ကတောင် လူဦးရေ ၆ သောင်းလောက် များနေပါလား
ပညာရပ်ဆန်တဲ့ အချက်အလက်တွေ စုထားတာမို့… ဘတ်သွားရုံသာ ဘတ်သွားပြီးဘာမှ မဆွေးနွေးနိုင်…
ရပ်ထဲ ရွာထဲက လူတွေ နားလည်လွယ်တဲ့ စာမျိုးနဲ့ရေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင့်….
7,724,713 people reached
Naung Chit, Ko Ko and 210K others